भत्किएको धुर्मुसको रंगशाला बनाउने जिम्म लिए प्रचण्डले, चितवन छाडेका धुर्मुस सुन्तलीले अब के गर्छन् ? (भिडियोसहित) – osnepal tv
चितवनको रामपुरमा बन्दै गरेको रंगशाला निर्माणको अन्यौलताबारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख खोलेका छन् । बुधबार भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रचण्डले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले चन्दा उठाएर बनाउन नसके आफू अघि सर्ने संकेत पनि गरेका छन् ।
यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ? रंगशाला निर्माणको अन्यौलता बढिरहेका बेला सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्ड चितवन पुगेका छन् । त्यसो त उनी नियमितरुपमा चितवन गइरहन्छन् नै । उनको गृहजिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र पनि हो चितवन । त्यसैले पनि प्रचण्डमा चितवनको विशेष मोह छ ।
आखिर किन प्रचण्डले यस्तो किन भने ? काठमाडौंको राष्ट्रियसभागृहमा त्यत्रो तामझामसहित कार्यक्रम गरेर धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई रंगशाला निर्माणको जिम्मा लगाइएको थियो । र त्यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वयं प्रचण्ड, भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहाल समेत उपस्थित थिइन् ।
यत्रो विश्वास गरेर धुर्मुस सुन्तलीलाई जिम्मा लगाएको प्रोजेक्टमा प्रचण्डले किन संसय व्यक्त गरे ? प्रचण्डले किन संसय व्यक्त गरे भन्नूभन्दा पहिले रंगशाला निर्माणको योजना कसरी सुरु भएको थियो भन्ने बारे विश्लेषण गर्नुपर्ला । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको नियामक निकाय आईसीसीबाट नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको वहस तातिएको थियो ।
Previous article Lawmakers call for repealing Guthi bill
Next article १४ करोड पारिश्रमिक लिएर पति रणवीर सिंहसँग यो फिल्ममा अभिनय गर्दे दिपिका